I-infographics yokuthengisa »Iphepha 256 lama-257 Martech Zone
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Nge-Agasti, uSoftchoice wathumela uphando kubathengi babo kwaye wafumana iimpendulo ezili-1,444 ezigqityiweyo ezimele ngaphezulu kwe-1,200 yamashishini amancinci naphakathi (SMB), amashishini, icandelo likarhulumente kunye nemibutho yezemfundo. I-71% yabaphenduli yayikwi-IT kwaye isampulu yayisisiseko se-50 yeepesenti yase-US kunye neepesenti ezingama-50 zemibutho yaseKhanada-ke leyo yayimele ummandla woshishino lwaseNyakatho Melika. Inqaku elinye lenkcazo-ntetho ekufuneka likhwaze kukumelwa kweWordle ngamagqabantshintshi: Ayasebenza
NgoLwesine, Novemba 4, 2010 NgoLwesine, Julayi 25, 2013 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Akukho maninzi kakhulu amashishini endiwasebenzelayo apho ndibona khona iimpawu eziqhelekileyo kwicandelo lentengiso, kodwa njengoko ndicinga ngeveki yam yomsebenzi kunye nendlela endiphendula ngayo kwintengiso, kufuneka ndivume ukuba olu phando lwenziwe nguBizo lunokuba kokunye. I-Bizo ikhuphe le infographic izolo, ebizwa ngokuba nguMcwangcisi weVeki yeNtengiso ebonisa ukuba iingcali zeshishini, ngokubanzi, kunokwenzeka ukuba zisabele kwiintengiso ezikwi-Intanethi. UBizo uphinde wavavanya ezintlanu zahluke kakhulu
NgoMgqibelo, Oktobha 9, 2010 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Sonke sinazo-i-villain ekhulayo kunye ne-snarls kuzo zonke izimvo zakho-ukucaphukisa ezinye iindwendwe kunye nokuvelisa ngokubanzi. Kuyinto entle yoxinzelelo, kodwa kukho indlela yokuthintela ububi beendaba zentlalo. Le infographic enkulu ekhutshwe yiJenali yeeNjini yokuKhangela ngokusekwe kwiiVillains ezi-8 zeMithombo yeendaba. Ewe kunjalo, kukho okuthile okungathandekiyo kwinto yokuba i-SEJ ifumene umxhasi kwi-infographic…
Ngaba Imibala ifuthe kwindlela yokuThenga kwi-Intanethi?
NgoLwesihlanu, Septemba 17, 2010 NgoLwesihlanu, Septemba 6, 2013 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Nantsi into ebangel 'umdla evela kwi-KISSmetrics ngombala kunye nefuthe layo ekuthengeni izigqibo. Ukugcina oku engqondweni, iposti kaNick yakutshanje ekusebenziseni iicookies ukubonelela ngamava ahlukileyo kumtyeleli kunokuba umthengi angene ngokufanelekileyo… mhlawumbi indawo yakho inokutshintsha iishiti zesitayile kwaye isuke kubume obumnyama (impuluse) iye kubume obupinki… okanye ukuba Uqhuba okhethekileyo, uyilo oluhlaza okwesibhakabhaka!
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Kwakumnandi kakhulu ukuqhuma kuJohn Uhri weRed Bit Blue Bit kwiBhlog Indiana, kulo nyaka. UJohn wenza into epholileyo-kunokubhala amanqaku aqhelekileyo ngexesha leengxoxo, uzobe imifanekiso yemifanekiso yolwazi (i-infographic). Ke, nantsi i-infographic enkulu yoShishino lweBlogging for Dummies ayenzileyo emva kokufunda incwadi (cofa ukukhuphela ubungakanani obupheleleyo)! Enkosi John! Kumnandi ukubona ukubonwa okunje kuba iyathelekiseka
Edlulileyo 1 ... 255 256 257 Next →